Somaliland: Cali Gure Oo Tilmaamay Waqtiga Ku Habboon In La Qabto Doorashada Madaxtooyada - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Cali Gure Oo Tilmaamay Waqtiga Ku Habboon In La Qabto Doorashada...
Siyaasiga Cali Maxamed Yuusuf (Cali-gurey) ayaa si farta ku fiiqay waqtiga ku habboon in la qabto doorashada Madaxtooyada Somaliland oo haatan u muuqata inay dib ugu dhacayso xilligii hore loogu cayimay ee ahaa 28ka March 2017 oo muddo kooban ka hadhsan tahay.
Cali-gurey oo qoraal ku baahiyey barta uu ku leeyahay facebook ayaa waxa uu u dhignaa sidan “Cimilada Somaliland waxa saamaynta ugu weyn ku yeesha dabaylaha loo yaqaan Maansuunka oo Jilaalkiina ka soo dhaca Waqooyi Bari (North East Mansoon) loona yaqaano Jiilaashin, Gugiina ka soo dhacda Koonfur Galbeed (South West Mansoon) loona yaqaan Dabayl Xaggaa. Waxa jira laba xilli oo kale oo loo yaqaano labada kalliilood (Iner-mansoonal) oo ah xilliyada kala guurka labada dabaylood oo ka horreeya labada xilli-roobaad ee guga iyo dayrta.
Haddii lugna baqe lugna dirrir u joog noqoto doorashooyinka waxa saamayn kara Jiilaal oo roob la’aan dadka reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada ah ku keenta in baad iyo biyo la’aani ku dhacdo taasina ay ku qasabto in degaanadii ay oolayeen ka dool raacaan oo degaamo kale oo kala fug u hayaamaan. Jilaalku waxa uu ugu darran yahay seddexda bilood ee January’ Febuary’ iyo March oo kaliil ah. Roobabka gugu sida caadiga ah waxay curtaan bisha April. Waxa halkan taal iyaduna xaggaagii oo dhulka xeebaha ahi ay aad u kulul yihiin gaar ahaan bilaha June, July, Augost. Sidaa marka ay tahay xilliyada doorashooyinka Somaliland waa in laga duwo oo aan lagu bergin lixda bilood ee Jiilaalka iyo Xaggaaga ah ee January, Febuary, March iyo June iyo July iyo Augost. Xilli doorashooyinku markaa waa in lagu beego lixda bilood ee kale.
Doorashadan imika dib u riixideeda la wado marka aynu eegno ugu horreyn haddii ay sababtu tahay abaarta waxa la qaban karaa oo ugu habboon horraanta may. Haddii ay dib uga dhacayso laakiin isla sanadkan in la qabto la doonayo oo aanay dib uga dhicin waxaynu haysanaa September, Octobar, November, iyo December. Intaa haddii ay dib uga sii dhacdo sheekadu markaa abaarta maaha ee waa muddo kordhin kale iyo sheekadii doorasho diidka.